कति सुरक्षित छ तपार्इंको कम्प्युटर ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा - IAUA
कति सुरक्षित छ तपार्इंको कम्प्युटर ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा
तपार्इं आफ्नो कम्प्युटरमा इमेल चलाउँदा धेरै चनाखो हुन जरुरी छ आफ्नो डाटाको ब्याकअप नियमित रूपमा सन्तुलन राख्नुहोस्।
रेनसमवेयरको शिकार भएका मानिसले यो कुरा पहिल्यै बुझ्नुपर्ने हो कि के फिरौती बुझाएपछि पनि के कम्प्युटर अनलक हुन्छ ?
भाइरस फैलिने मामलामा मानिस धेरै विश्वास गर्छन्। यसमा कुनै मेलको माध्यमबाट एक लिकंमा क्लिक गर्नका लागि उकास्ने गरिन्छ।
साइबर चोरहरुका लागि रेनसमवेयर एक राम्रो हतियार हो। उनीहरुले यसलार्इ एक राम्रो पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्।
Previous Previous post: नेपालमा बनेको टपरी अमेरिकी बजारमा जमाउँदै
Next Next post: नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास र बिकाशक्रम